Mucaawin Miracle Berry: Miyuu suurtogal ah in uu ku koro xagaaga xagaaga ee dhexda dhexe?
Rummaanku waa bururi ballaaran oo koonfureed ah oo ku kora dalal diirran isla markaana dhuftey badhtamaha dayrta. Waxaa loo tixgeliyaa calaamadda bacriminta, taas oo aan la yaabin: waxaa jira boqollaal koob oo yar yar oo hoos miro adag oo miro ah. In kasta oo xaqiiqda ah in rummaanku yahay geed kulul oo jecel, waxaa jira dad badan oo doonaya in ay tijaabiyaan gacanta oo ay koraan miraha mucjiso ee Russia.
Fikradda ganacsigaaga gaarka ah: wax soo saarka khudradda iyo miraha la qaboojiyey
Khuraafaadka ah inaysan jirin fitamiino iyo walxo kale oo waxtar u leh miraha iyo khudradda la qaboojiyay ayaa la badalay ku dhawaad ​​30 sano ka hor. Tani waxay door weyn ka qaadatay horumarinta ganacsiga ee jihada this. Sannadkii 90-aad, hoggaaminta marka la soo saaro badeecadahaas oo la keeno dhul-beereedka Ruushka waxaa degay shirkado shisheeye. Waqti ka dib, saamiga alaabta ee qaabka hadiyado la qaboojiyey ee dabiiciga ah ee suuqa Russia ayaa si weyn u kordhay by soo saarayaasha gudaha.
Hadda dadku waxay xaqiiqsadeen in isticmaalka qalabka kiimikada aan-dabiiciga ahayn ay waxyeello u geystaan ​​caafimaadkooda. Tusaale ahaan, ku yaala dukaamada dukaamada waxaad ka heli kartaa dhadhan, xayawaanka dhirta, dhadhanka. Taasina waa sababta maanta, bulshadu isku dayayso inay soo iibsato alaabeed. Sidee ugu ballan-qaadan kartaa ganacsigan ee Russia?
Sidee laguugu daraa midabo dhalaalaya beertaada?
Haddii aad u maleyneyso in aysan jirin midab ku filan beerta, ka dibna isku day in aad kala duwo naqshadeynta hadda, ha dib u dhigin sanadka soo socda. Muujinaya fikrad yar, waxaad abuuri doontaa farshaxan farshaxan ah goobta, beerashada dhir dhalaalaya qaybahooda kala duwan. Dhibaatooyinka noocan oo kale ah ee dhirta ma aha oo kaliya mugdi ku ah jawiga goobta, laakiin sidoo kale buuxi wada noolaanshaha iyo raaxada.
Sidee loo ilaaliyaa loona hagaajiyaa bacriminta dhulka?
Milkiilayaasha beerahooda waxay leeyihiin kheyraad aad u kooban. Gaar ahaan, carrada, taas oo loo isticmaalo dhirta sii kordhaysa iyo si joogto ah qoday, ayaa la soo dhameeyay waqti ka dib. Intaa waxaa dheer, waqti ka dib, humus, taas oo ah, qaybta faa'iido leh ee dhulka, waa la dhaqay. Iyadoo aan humus waa adag tahay in la qiyaaso dhirta sii kordhaysa oo keena badan oo goosashada.
Dayrta dalka: sida loo sameeyo sariirta beerta dabiiciga ah
Waqtigayaga mashquul iyo walaac badan, waxaa jira dad badan oo doonaya inay fasax ka qaataan magaalada xilliga xagaaga xagaaga, isla mar ahaantaasna khudradda iyo miraha la dhigo miiska qoyska oo aan lahayn "kiimiko" kala duwan. Sidaa daraadeed, dad badan oo xagaaga soo socda ayaa raacaya fikradda beeraha dabiiciga ah, yoolka ugu weyn ee ay tahay in la ilaaliyo lana hagaajiyo bacriminta ciidda iyadoo loo marayo hab dabiici ah.
Fikirka ganacsigaaga gaarka ah: ubax sii kordhaya
Midkeen kasta wuxuu leeyahay fikrad u gaar ah oo hanti, ganacsi jecel, mustaqbal aamin ah. Waxaan dooneynaa in aan si buuxda u qancino rabitaankeena iyo baahideena. Haddii uu jiro qoys, markaa qiimaha lagama maarmaanka u ah noloshu waxay kordhisaa dhawr jeer. Qofku waa inuu ka shaqeeyaa meelo badan, qaar kalena waxay furaan ganacsigooda, taas oo aan kaliya bixinayn hab nololeed, laakiin waxay kaloo keenaysaa qanacsanaanta.
Sidee dib loogu dhiska beerta ubaxa?
Sariiraha ubaxu waxay si farxad leh ugu farxaan muuqaalkooda bisha August. Inta lagu jiro muddadan, way fiicantahay in la ilaaliyo noocyada kala duwan ee midabada iyo qaababka, si aad u hesho raaxo madadaalo. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd August ee ahayd in ay ahayd mid aad u muhiim ah ma aha oo kaliya in la eego ubaxa, laakiin sidoo kale si buuxda dib u qaabaysan beerta. Dhamaantiin, waa dhamaadka xagaaga in aad aragto waxa fursadaha beeraha ubaxa ku jira iyo marka laga reebo mudnaanta aad si buuxda u ogaato cilladaha.
Sida loo xalliyo dhibaatooyinka beerta iyadoo la adeegsanayo naqshad dhuleed. Cayayaanka iyo cudurrada
Изначально ландшафтный дизайн рассматривается многими обывателями как некий элитарный продукт или досуг. Распространенное мнение предполагает возможность заняться ландшафтным дизайном только при высвобождении некоторого времени и финансов. Haddii aan sharraxaad ka bixinno faahfaahin dheeri ah, markaa waxaa loo tixgelinayaa inay tahay dacha caadiga ah iyada oo aan la isku qiyaasin isbedelka beerto ama isbedelka fayadhowrka.
Haddii uusan qaboojiyaha ku jirin dacha, ama korontada si lama filaan ah u damin, ma aha lagama maarmaan in la qaato raashinka hal ama dhawr maalmood meel kale, ama cunto cuno qasacadaysan. Alaabooyinka waxaa loo hayn karaa dhowr maalmood maalmo badan iyadoo la isticmaalayo qalabka wax lagu duubo. Kaydinta badeecooyinka cusub iyo kuwa ka tirsan qaybta lammaanaha, waa in laga reebo koritaanka iyo dhalida bakteeriyada leh saameyn xun.
Sida loo kariyo macaanka masraxa - 10 qarsoodi
Sweeten inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee sanadka waxay noqon kartaa macaanka weyn, waa arrin aad u fiican oo wacan leh cabitaan diiran ama rooti la dubay. Inkastoo dad badani tixgeliyaan macaanka, dhab ahaantii waa saxan aad u casri ah. Tusaale ahaan, macaanka roodhida, sida caadiga ah, ayaa loo adeegsaday miiska boqortooyada. Haddii aad haysato fursad aad ku kariso nooca ilaalinta noocan ah, waxaad haysataa fursad aad u wanaagsan oo aad u kala duwantahay mulkiilahaaga.
Qurxan qurux badan ee beertaada
Geeddi aad u qurux badan oo Buddley ah, kuwaas oo dalkooda ku yaala Shiinaha iyo Japan, waxaa laga helaa beeraha, beeraha beerta iyo dhulalka dhulalka ee bartamaha Russia. Qiyaastii qarnigii la soo dhaafay, qiyaastii 150 nooc oo ka mid ah geedahaas quruxda badani waa la jarjaray, dabeecadda caadiga ah ee loo yaqaan magaca Adam Adam Baddle.
Sida loo doorto digniinta saxda ah ee bixinta?
Dhibaatada walwal badani waxay tahay amniga hantidooda ku yaalla guryaha dalka inta lagu jiro xilliga ka baxsan xilliga caadiga ah. Iyadoo aan lahayn nidaam nabadgelyo oo gaar ah, oo leh nidaam qaylo leh oo lagu kalsoonaan karo way adag tahay in la sameeyo Wax kasta oo ah dayrka xoogan, albaabbada, derbiyada iyo albaabada albaabka, maqnaanshaha milkiilayaasha, tuugo khibrad leh ayaa wali guriga geli kara.
Sidee u koraan in mid ka mid ah dhirta Russia dhirta sii kordhaya cimilada hoosta? Tani, waxaa jira dhaqanka tubta ama sharciga. Ku saabsan waxa ay tahay, waxa dhirta ay ku haboon yihiin in ay sii kordhaan tuubooyinka, sida loo doorto, dhirta iyo daryeelka si habboon iyaga, waxaan ka hadli doonaa maqaalkan.
Tababarka ku saabsan abuurista xayawaanka beerta Japanese
Nooca noocaas ah ee naqshad dhuleedka wuxuu awood u leeyahay inuu qurxiyo beerta. Abuuri boggaaga gaarka ah sida goob qayaxan oo kali ah ma aha mid adag. Beerta Japan waxay noqon kartaa laba nooc: dhagax ama xoorto. Haddii dhagaxyadan dhagaxyada noocaas ah ay muddo dheer u adeegsadeen bannaanka si ay u qurxiyaan sirqo gaar ah, version Moss waa ka khafiifsan.
4 xabbadood oo kabadan 3 ton oo khudrad ah ama wax-soo-saarka beeralayda Maraykanka ah
Waxaa laga yaabaa in beeraha dabiiciga ahi mustaqbalka beeraha, ama waxay noqon kartaa isbeddel muuqaal ah. Maanta waa suurtagal in la bixiyo jawaab sax ah. Falanqaynta buuxda maahan macluumaad ku filan. Beeralayda isticmaala dhowr sano, waxay siin doonaan jawaabo sax ah. Hase yeeshee astaamo cad oo muuqaal ah, macluumaad badan oo tirakoob oo ku saabsan carrada, dalagyada, meelaha iyo ka kooban bacrimin ayaa loo baahan yahay.
Miyuu suurtagal noqon karaa in uu kobciyo cagajugeyn xagaaga xagaaga bartamaha dhexe?
Miro iyo caano caafimaad leh oo xasilooni ah ayaa waxay doonayaan inay ku koraan deganaha meel kasta. Nasiib darro, nasiib daro, ma kori doono jiinka dhexe. Si kastaba ha noqotee, waad soo qaadan kartaa noocyo badan oo ku noolaan doona qaboobaha qaboobaha. Noocyo Si sii kordhaya on cottage xagaaga ee dhexda dhexe ee ku haboon yahay sapling koray abuur ah.
Sidee loo dhisi karaa pergola wadanka gudaheeda gacmahooda?
Pergola waa naqshad caan ah oo loo isticmaalo naqshada muuqaalka. Nuxurta naqshadaynta waa mid sahlan - u wareegitaanka qaybaha. On jirkan waxaa la beeray geedka kasta oo fuul. Marka xigta, tixgeli waxa abuuraya pergola. Ogeysiiska, kama hadalno dhismaha pergolas, maaddaama dhismaha uu qayb ka yahay geedi socodka abuurista oo dhan.
Teknoolojiyada cusub ee adeega beeraleyda
Beeralayda Hindiya ayaa la yimid codsi lagu rakibi karo kiniin ama smartphone. Waxaa loo isticmaalaa si shaqaalaha shaqaalaha ah ay si dhakhso ah u waydiiyaan su'aalaha khabiirada beeraha waxayna helayaan jawaabaha iyaga waqtigooda. Tani waxay ka caawineysaa habka sahlan ee beeraha iyo qorsheynta shaqada oo dhan.
Khudaarta cagaaran - cayayaanka
Pasternak ayaa iska leh qoys dallad ah oo waa dalag la mid ah dhir, dill iyo dhir kale oo leh dalladaha inflorescences. Heerka uu dhirta ugu dambeyn gaarayo wuxuu ku xiran yahay tayada daryeelka, habka beeritaanka iyo nooca carrada. Cun khudradda xididka ah, kuwaas oo qaada qaab wareegsan ama qaab khudradeed.